Ciidamada Booliska ee Magaalada Mombasa ee dalka Kenya, ayaa gacanta ku dhigay saddex ruux oo la sheegay inay qorsheynayeen weeraro inay ka geystaan Magaalada Mombasa – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Booliska ee Magaalada Mombasa ee dalka Kenya, ayaa gacanta ku dhigay saddex ruux oo la sheegay inay qorsheynayeen weeraro inay ka geystaan Magaalada Mombasa
Ciidamada Booliska ee Magaalada Mombasa ee dalka Kenya, ayaa gacanta ku dhigay saddex ruux oo la sheegay inay qorsheynayeen weeraro inay ka geystaan Magaalada Mombasa, kadib markii Booliska ay heleen macluumaad ku saabsan raggaasi.
Dadkaan ayaa la xiray xili ay isku dayayeen in ay meherad ganacsi ah oo sharci darro ah ka furtaan xaafada Mwembe Tayari ee Magaalada Mombasa.
Ciidamada Booliska oo saddexdaan nin qabtay ayaa ka shakiyay, waxaana intaasi kadib lagu sameeyay Baaritaan dheeraad ah oo suuragelisay in laga helo macluumaad badan.
Booliska ayaa tagay Hotel ay deganaayeen raggaan oo ku yaallo Magaalada Mombasa gudaheeda, waxaana Hoteelka laga helay 54 wareeg oo rasaas ah, sharciyada aqoonsiga oo 2 ah iyo waxyaabo kale.
Ciidamada Booliska ayaa magacyada raggaan waxa ay ku sheegeen inay kala yihiin Mohammed Hussein, Roba Abdile iyo Aden Abdulla.
Waxa ay ka soo jeedaan Tana River, waxaana Booliska ay tilmaameen in raggaan ay qorsheynayen fulinta Weeraro qorsheysan, balse goobta ganacsiga ay ku dhuumanayeen oo ay iska dhigayeen dad ganacsato ah.
Shabaab ayaa dhowr mar weeraro kala duwan ka geystay gudaha dalka Kenya, iyadoo tani ay ku soo aadeyso xili ay sii kordheen weerarada ka dhacaya dalka Kenya.